China High yepamusoro Square Transparent Glass Dropper Liquid Foundation mabhodhoro fekitari uye bhizimisi | Jiamei
Yakakwira yepamusoro Square Transparent Girazi Dropper Liquid Foundation Mabhodhoro
Unyanzvi: 20ml, 30ml, 40ml
Square Transparent Girazi Dropper Liquid Foundation Mabhodhoro
Yakakwana yeLiquid Foundation
Square inoonekera mvura hwaro hwaro mabhodhoro akagadzirwa emhando yepamusoro girazi, inoyevedza kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye zvinoenderana nenyika yemhando yepamusoro. Inoenda neyekudonha, uye kune akawanda mhando dzakasiyana dzejel musoro anodonhedza. Unogona kusarudza zvinoenderana nezvaunoda, bata ruzivo rwevatengi.Simbiso yakasimba yevhavha inodzivirira kusvibiswa. Muromo webhodhoro unotora dhizaini dhizaini uye inoenderana yekumanikidza muromo kudzivirira kubuda kwemvura. Pazasi pebhodhoro rakagadzirwa kuita concave uye convex tambo inorwisa-skid dhizaini, kuomesa pasi pebhodhoro. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekubata serum, yekuchenesa maoko, mafuta ekuzora, nezvimwe
Iwo maratidziro eakajeka akajeka emvura hwaro mabhodhoro ari 20ml, 30ml uye 40ml Iwe unogona kusarudza iwo maratidziro zvinoenderana nezvaunoda. Kambani yedu ine silika skrini, kupisa kutsika, chando, chitaridzi, kudhinda ruvara, kushongedza kupfura uye mamwe maitiro. Isu tinoteedzera iwo mufananidzo iwe wawakapa zvakakwana kuti uve nechokwadi chekugutsikana kwako. Tine huwandu hukuru hwenzvimbo yakamirira yako yekugadzirisa tsika.
Kana uchida, isu tinogona kukupa muyenzaniso kwauri kuti uve nechokwadi chekupedzisira chimiro. Nekuti isu tine skrini yekudhinda, kupisa kutsika, chando, chitaera, kudhinda ruvara uye mamwe maitiro, saka tinogona kugadzirisa mazwi akasiyana uye mapatani iwe. Mushure meizvozvo, iwe unobhadhara dhipoziti, uye isu tichaburitsa chigadzirwa muhuwandu maererano nemuenzaniso. Chekupedzisira, chigadzirwa chinotumirwa kwauri uye chinunurwa kuenzanisa kubhadhara mushure mekugamuchirwa kwako.Saka chibvumirano chedu chaitwa
Kana iwe uine chero mibvunzo yaungade kubvunza, unogona kubata vedu vashandi vevashandi, ivo vachakupindura iwe. Isu tinokushandira iwe nemoyo wese uye tinotarisira kusvika kune inofadza kubatana newe.
Pashure: High yepamusoro sikweya forsted girazi mvura hwaro mabhodhoro pamwe gobvu pasi
Zvadaro: Wholesale Luxury Flat Bhegi Essence Girazi Isina Bhodhoro